Unqume ukufunda esikhathini esizayo ku umshayeli nomsizi noma umshayeli? Khona-ke lesi sihloko ukuphi. Lapha sinikezwa Imininingwane egcwele mayelana nokuthi ubani kuthatha kulo mkhakha, yiziphi izinhlobo kaloliwe ukuphi. Sihlaziya nawe amaphuzu ayinhloko ngomsebenzi "unjiniyela umsizi":
Ake sihlole isinyathelo ngasinye nto futhi ucabangele yonke imininingwane. Noma kunjalo, asiqale yokuthi lo msebenzi nokuthi ngabe uthatha.
Sihlaleleni ngokuzumayo wanquma ukuqala naye? Futhi ngenxa yokuthi kuzoba ngakho: kuqala, uzothunyelwa emtholampilo ndima yayo. Ngezansi sethula sezifo ezivamile, ngenxa okuyinto, ngeshwa, e abasizi somshayeli kungukuthi kuthathwe. Eminyakeni eyishumi edlule, umshayeli nomsizi ukuqeqeshwa senzeka ekolishi ujantshi. Okwamanje, kuloluhlelo lwemfundo abaphila ngayo ihluke ngokuphelele. Kodwa noma kunjalo, ngaphambi le nsizwa wanika yokungena izivivinyo, wadlula lapho ngihlolwa. Okwamanje, cishe kunoma iyiphi edepho futhi nestling esizayo umsizi umshayeli zangaphambilini ezothunyelwa emtholampilo. Ngakho, iziphi odokotela main? Ake uhlu:
kudokotela wamehlo okunethiwethi;
Lezi akuzona zonke izazi. Ngaphezu kwalokho, uzobe okukhulunywe esibhedlela wesigodi esiseningizimu ikhadi umtholampilo neuropsychiatric nokusebenzisa kabi izidakamizwa. Kubalulekile ukuthi wena ungekho wawunezinsuku kubhaliswe.
Udokotela ekulalela, ucela ukuthi kukhona isikhalo kunoma yini. Okulandelayo ngeke ulinganise blood pressure. Kufanele kube evamile. Akunakusetshenziswa ungenzi lutho izidakamizwa azenze zisesimweni esihle. Khumbula ukuthi izingozi kwenzeke nabasebenzi zokuthutha ngenxa yalesi sizathu: ukuthula ngalesi sifo.
Esikhathini Lore kufanele uhlole ukuzwa, ekhaleni, umphimbo, umlomo. Kancane kwehle ukuzwa endlebeni eyodwa unesizathu ukubhala siphetho: "Bayehluleka". Ngakho-ke, uma unezinkinga kule ndawo, noma okungenani ukukhala njalo ezindlebeni, ngeke miss e abasizi somshayeli.
Okubhekisiswa kwenu kumelwe abe ngamaphesenti ayikhulu. Kufanele kube khona ukuphambuka e kombala. Udokotela wamehlo uhlole ngokucophelela amehlo akho. Uma ukugqoka contact lens noma laser ukulungisa kwenziwe, khona-ke ngeke ukwazi ukucashela. Noma kunjalo ngeke kudlule ngihlolwa akuyona.
Zenhliziyo ECG kumele ibukwe kuphela cardiometry enhle ngaphandle ngeziphambeko.
Udokotela ohlinzayo uhlola ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi ziphephile zonke izitho zomzimba azikho yokuphazamiseka indlela omi ngayo. Ngefanelo nangokuvumelana nalo libalulekile.
Halala, uma sekudlule lapho ngihlolwa! Ucabanga ukuthi ungakwazi manje ngabomvu isikhundla ikusasa "unjiniyela umsizi"? Ukuqeqeshwa kuzokwenziwa kusasa wena ningangikholwa. Usadinga zidlule Ukukhetha professional. Uma uke ngempumelelo zonke odokotela, lesi sazi, ngeshwa, ungalahlekelwa.
You faka ngemuva ukuqapha, udinga ukuthola kuphela lobubhalo ukuthi iphuzu ukuthi luvele esibukweni. Uma une ukusabela okuhle nokunaka ke uzophumelela, kubalulekile ngoba angathuka esenze ingozi.
Ungase zidlule kanye nezinye izinhlobo zokuhlola. Konke kuncike inkampani: esitimeleni noma RZD. Futhi kudlala i ababalulekile uhlobo esitimela.
Khetha kusengaphambili lapho ufuna ukusebenza: nasezitimeleni noma zinomsebenzi kwaloliwe. Nakuba kuhlelwe esikhathini esizayo esiseduze emzileni ohamba ngaphansi komhlaba eMoscow ukulishiya ngokuphelele umsebenzi abantu ababili, okungukuthi, akudingeki umshayeli nomsizi. Training kuyaqhubeka njengamanje nge eyehlelayo ukuthi ngeke ke kuphela wemishini. Ngamanye metro angase okwamanje asebenze abantu ababili, kodwa hhayi kuzo zonke izindawo.
On the wesitimela, ngakolunye uhlangothi, zidinga kokubili. yokushayela kagesi ukuqeqeshwa Railways Umsizi senzeka esikhungweni sokuqeqeshwa, futhi ngokuqondile umshayeli, ukuze ngalo iqinile.
Izinhlobo amakhanda, izitimela kagesi, futhi ikakhulukazi ukuqeqeshwa
Ngo kagesi ahamba ngaphansi komhlaba ezikhona ngenxa izimoto railcar (isitimela commercial). Bani ufunde, ukhetha ngokwakho. Ikheli kubalulekile electrodepot okungukuthi esiseduzane kwekhaya lakho.
Railways ezinhlotsheni izitimela eside:
motor-imoto kaloliwe (izitimela);
kagesi (umgibeli noma izimpahla eziya);
esitimela (umgibeli wezimpahla, oyinhloko / shunting);
izitimela kwezomnotho kanye imishini esikhundleni.
Cishe bonke (ngaphandle shunting) umsebenzi wenziwa e obubili.
Ezemfundo Umsizi umshayeli kagesi kuthatha izinyanga mayelana 3-4. Phakathi nalesi sikhathi anakho ukufunda zonke izisekelo mayelana nezibopho, isakhiwo, izimoto, ufunde ngezinkinga kungenzeka nokuthi ukukhomba kubo.
Awufuni ukusebenza ngesitimela, wena akhangwa kakhulu kagesi? Khona-ke akudingeki ukuya e railcar (esitimela) edepho, futhi electrodepot. Electric esitimela kwabashayeli umsizi lula kakhulu. Kuyaphawuleka ukuthi abaningi amanyuvesi ujantshi nezikole lobuchwepheshe phakathi neminyaka umkhuba ukuqondisa abafundi (amavolontiya) ukusebenzela Railways. Isikhathi uzobe wachitha kuphela ukudlula ibhodi wezokwelapha. Khona-ke, uma balidlulisele (futhi izazi zokusebenza kwengqondo, futhi), ubeka ukuthi kwesekelwe ngokulondoloza. Lokho, e-gumbi kuzodingeka ezintathu: umshayeli, umsizi umshayeli futhi. - Umsebenti wakho kute ukhone kubuka, ukubuza imibuzo kuya kulesitfupha ngesihloko ukufunda. Uma uke ngempumelelo umfundisi ukuhlolwa / credit, uzovunyelwa ukuba asebenze.
Cishe efanayo ukuqeqeshwa uhlelo ku lesitimela. Kodwa ngifuna ukukuxwayisa ukuthi lokhu esitimela ukusebenza eziyingozi kakhulu, njengoba kukhona isisi esiyingozi udizili emkhathini. teplovozniki Abaningi abaye basebenza amashumi eminyaka, ukuhlupheka izifo yamaphaphu futhi engenhla ipheshana zokuphefumula. umsizi kwabashayeli esitimela senzeka ngendlela efanayo njengoba elektrovoznik.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlobo ukhethe esitimela, ongaphansi komhlaba, noma RZD, kufanele ufunde izincwadi ezintathu ezibaluleke kakhulu:
Pte (lobuchwepheshe imithetho operation).
ISI (isignali imfundo).
PID (afundiswe ukuhamba izitimela kanye nokusebenza shunting).
Ungakwazi ukubuza noma imuphi umbuzo zalezi zincwadi. Ngakho-ke, ngosuku lokuqala lokuthenga kwabo futhi baqale ukufunda, ukutadisha. Ngomqondo onabile, ukuqeqeshwa umsizi umshayeli (RZD) kuyehla kube izinhloso ezintathu:
incwadi siyazise: Pte, le ISI, le IRD;
izakhi kudivayisi kanye nokulungiswa amakhanda (kuhlanganise wabambana futhi bayazehlukanisa);
Umsebenti wakho ngesikhathi isitimela - ukulandela imigqa ecacile, amarobhothi, isivinini. Une ukulawula izenzo umshayeli, kuhlanganise isheke: Musa idlule ijubane ke, lapho ukwenza kanjalo akudingekile. Lapho eziphuthumayo umsizi kufanele ukuphazamisa kwabhoboka eziphuthumayo uma umshayeli wemoto engakwazanga ukuyigwema ukuthatha noma yisiphi izinyathelo.
Amaphutha unjiniyela umsizi: Russian "mhlawumbe" futhi "akwenzeki lutho." Ngeshwa, ngenxa abstractness ka nabasebenza esitimela ku Railways kwenzeka engozini enkulu. Ngokuvamile, i-inkinobho okuthunyelwe komsebenzi ngephutha ukuhumusha imicibisholo akuzona emzileni. Inhloso Umsizi: Ukuqinisekisa ukuthi njengoba Bhalobhasha.
Salary kanye namahora okusebenza
Umholo isilinganiso umsizi somshayeli phezu Railways Russian - ruble 20 000. Konke kuzoncika esifundeni, ubude inkonzo. Ngesikhathi eMoscow icala umgwaqo iphezulu kakhulu.
Ngokuqondene ihluzo, abashayeli main nabasizi akuzona esitebeleni. Basuke banikezwe ngokomthetho uwoyela abakhwabanisi isikhawu (amahora 16), kanye kuyinsakavukela nyangazonke amahora. Lapho bebizwa ukuba beze ngokuzayo crew esitimela kungenzeka bazi. Ngakho uma ungowesilisa khulula ngazo zonke izindlela, zizwe ukhululekile ukukhetha umsebenzi. Kumele wakhumbula siphetho: unjiniyela umsizi Railways kagesi isifundo senzeka esikhungweni sokuqeqeshwa, ngenkathi othola isibonelelo.
Lapha thina sikanye nawe, futhi wafunda lo mkhakha we umsizi yokushayela, sabuka yonke imininingwane. Futhi wena nje ukuphendula umbuzo: Ingabe kufanele sibe nempilo enhle, futhi uma nginesifiso?
Kuyini imisipha ithoni?
Adblock Plus: ukubuyekezwa. Adblock Plus uhlelo "i-Android"
Isimangalo ayemkweleta e-ukuvalwa - isampula. I-oda ngokumiswa, uhlu abakweletwayo '
Mono-Ukudla ngempumelelo isisindo ukulahleka. The ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI mono-Ukudla (ukubuyekezwa)